प्रतिभाको पहिचान | मझेरी डट कम
(पर्दापछाडिबाट आमाको आवाज आउँछ ।)
आमा : दीपक..... ए... बाबू ...... राम्रो पढ है .... राम्रो पढ ।
दीपक : हस् .... मम्मी .....
आमा : राम्रो पढेर पाइलट बन्नु छ नि तिमीले .... । उत्तिकैमा तिम्रो साथी शायना कति पढिरहन्छे ...।
दीपक : हस् ... मम्मी ... हस् .... हजुरले चिन्ता गर्नै पर्दैन .... । त्यसो त शायना पनि मजस्तो त कहाँ छ र मम्मी ..... (उसको हातमा भने चलचित्रका रङ्गीन पत्रिका हुन्छ । त्यसैलाई हेर्दै...) यस्तो पत्रिका पढेर यसकै बारेमा जाँच दिन पाइने भए पो .... बाबाका लागि डाक्टर बन्नु रे... मम्मीका लागि पाइलट ... अनि मामाका लागि इ. र हजुरबाका लागि पण्डित.... हरे शिव !
(छेवैमा भएको मोबाइल निकालेर डायल गर्छ अनि कुराकानी सुरु हुन्छ)
दीपक : ओए समीर ...., तँ के गर्दैछस् ?
समीर : के न के ... अनि तँ चाहिँ ... ?
दीपक : के गर्नु र ... मम्मी पढपढ भनिरनु भको छ तर... म चाहिँ ... उही त हो तँलाई था छँदै छ नि ... (उही रङ्गीन पत्रिका खेलाउँदै .... )
समीर : अँ.... भन् किन फोन गरिस् ?
दीपक : मेरोमा त फेसबुक धेरै चलायो भनेर नेट नै बाबाले काटिदिनु भा छ । मोबाइल पनि बल्ल बल्ल छुन मात्र पाइन्छ । नेटमा हेर त ... बजरङ्गी भाइजानले आजसम्म कति करोड कमाएछ ?
समीर : एक छिन पखै त ..... (केही समयपछि) ५९४ करोड ....
दीपक : आम्ममम ...... अनि सुन त, तँसँग कुनै पोट्रेट छ भने यसो म्यासेन्जरमा सेन्ड गर्दे है । ल अहिले फोन राख्छु ल । भरे स्कुलमै कुरा गरुला .... ।
समीर : ल ल ।
(फोन राखेर पत्रिकाका पाना पाना हेर्दै कल्पनाको संसारमा हराउँछ । नाचगानमा मस्त हुन्छ, रङ्गीन संसारमा हराउँछ । फिल्मी दुनियामा मग्न हुन्छ । अर्को कोठाबाट नै फेरि आमाको आवाज आउँछ ।)
आमा : दीपक ..... ए ... छोरा ... पढ्दै छौ कि सुत्यौ हँ .... ?
दीपक : (तद्राबाट झल्यास्स ब्यूँझँदै) मम्मी म पाइलट बन्दै छु.... अँ ... अँ... पाइलट बन्नका लागि पढ्दै छु ... ।
शायना : (डोर बेलको आवाजसँगै) दीपक ...... ए .... दीपक .....
आमा : ए.... शायना पो ...... ?? ए ..... दीपक... शायना पनि आई .... है .....
शायना : नमस्ते... आन्टी ....
आमा : नमस्ते नानी .... सञ्चै छौ ?
शायना : हजुर ....
दीपक : शायनालाई यतै पठाइ दिनु न मम्मी ....
शायना : ल ... ल.. म आफैँ आएँ ... (शायना दीपकको कोठामा आउँछे । टेबलको छेउमा बस्दै...) खुब पढ्छस् कि क्या हो आजकल ... ?
दीपक : (छड्के आँखाले हेर्दै) पढ्नु परेन त .... डा., इ., पाइलट, पं सबै बन्नु छ ... आफूले ....
शायना : (हाँस्दै) नहँसा न फेरि ..... रत्नाकार पो बाल्मीकि बने त .... तँ रत्नाकर होस् र ?
(डोर बेलको आवाजसँगै बजारबाट टन्न सामान लिएर दीपकको बाबा पनि आइपुग्छन् । सरासर उनी दीपककै कोठामा आउँछन् । पछिपछि दीपकको आमा पनि आउँछिन् ।)
आमा : ए... चाँडै आइपुग्नु भएछ त ....
बाबा : अँ ... आज धेरै किनमेल नगरेको ....
आमा : (झर्किँदै) सामान त उहीँ किचनमा राख्नु पर्छ ।
बाबा : ए.. शायना..., तिमी पनि पो यहीँ .... ?
शयना : (उठेर नमस्कार गर्दै) नमस्ते अङ्कल...., हजुर । एकछिन दीपकसँग केही पढाइको छलफल गरौँ अनि आज हाम्रो स्कुलमा प्यारेन्ट्स डे भएकाले उसलाइसँगै जाऊँ भन्न पनि आएको ।
दीपक : (रिसाएजस्तो गरी) तैँले नभने नि जैलेसँगै त जाने हो नि ... ।
शायना : भए पनि .... नरिसा न .... (नम्र भावमा)
बाबा : ठिक छ शायना ... एकछिन रिसाउनै देऊ न त ... । सिनेमाको पत्रिका हेर्न नपाएर किताब हेर्न परेपछि यस्लाई यस्तै हो । (सोफमा बसेर हात पुछ्दै) ए... साँच्चै प्यारेन्ट्स डे को प्रोग्राम चाहिँ कति बजेबाट रे ?
शायना : अँ .... ११ बजेबाट हो अङ्कल । आज प्यारेन्ट्स डे मात्र नभएर हाम्रो रिजल्ट पनि हो नि । अङ्कल आन्टी दुवै जना आउनुहुन्छ होला नि है ?
बाबा : म र दीपक मात्र आउँछौँ होला नानी .... ।
आमा : हैन... हैन... हामी दुवै जना आउँछौँ, बाबूकै स्कुल जानलाई कत्रो हतार गरिराछु । (अर्को कोठाबाट आएको आवजसँगै उनी पनि दीपककै कोठामा आइपुग्छिन् ।)
बाबा : अनि दीपक, टेस्टहरू चाहिँ कस्तो गर्या छस् त ?
दीपक : खै बाबा... दिन त राम्रै दिएको छु ... आउँदा चैँ के हुने हो ... । (छेवैमा भएको मोबाइल खेलाउँदै बेडमा नै पल्टिरहेको हुन्छ ।) ९ बज्न लागेछ मम्मी, स्कुल जान ढिला हुन्छ फेरि ।
शायना : ल ल... अब म पनि खाना खाएर मामु पापालाई लिएर आउँछु । अहिले गएँ है त अङ्कल आन्टी । ओए ... दीपक बाइ.....
(बाबा सोफामा बसेर पत्रिका पढिरहेका हुन्छन्, यत्तिकैमा हुन्छको भावमा टाउको हल्लाउँछन्, मम्मी कपडा पट्याउँदै हुन्छिन् अनि दीपक चाहि मोबाइलमा नै झुन्डिरहेको हुन्छ ।)
दीपक : ल ल जा .... यति भन्न पनि तँलाई यहीँ आउनु पर्ने ..., फोन गरे हुन्नथ्यो ?
शायना : (मुख बनाएर जिस्क्याउँदै) लु... अबदेखि नआउँला नि त तेरोमा भएन .... ? (केही हाँसोको भाव छोडेर त्यहाँबाट जान्छे ।)
आमा : यसको बानी यस्तै छ... नानी... माइन्ड नगर है ...।
(पृष्ठभूमिमा हस् भनेको शायनाको आवाज आउँछ।)
(विद्यालयको प्राङ्गण, विभिन्न विषयका विषय शिक्षक टेवल राखेर बसेका छन् । आआफ्नो टेबलको माथि नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक लागायत अन्य विषयहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा लेखेर २÷२ मीटरको अन्तरमा देबल राखिएको छ। एउटा टेबलमा चहिँ कक्षा शिक्षक विधान के.सी. लेखिएको छ । केही अभिभावक र विद्यार्थीहरू कुनै कुनै विषयका शिक्षकहरूसँग आफ्ना छोराछोरीको प्रगति विवरण बारे छलफल गरिरहेका छन् । दीपक चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्ना आमाबाबालाई उसको विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक नवीना गुरुङसँग भेट गराउन लैजान्छ ।)
दीपक : गुड मर्निङ म्याम...
नवीना : मर्निङ... दीपक
(बाबाआमा दुवै एकै स्वरमा हाँसोको भावमा) नमस्कार है म्याम ...
नवीना : नमस्कार हजुर, (आराम विरामको कुरा साटासाट हुन्छ ।)
बाबा : छोरोले यसपालिको परीक्षा कस्तो गरेको होला ...... ??? के छ यसको हालचाल .....
नवीना : म उसको परीक्षाको विषयमा त त्यति जानकार छैन ..... म उसको अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक हुँ ..... यसपालि त बाबूले गज्जबै गरेको छ नि सर । उसले गर्दा हाम्रो स्कुलले यसपालि धेरै नै टुर्नामेन्ट जित्यो ।
बाबा : किताबभन्दा बाहिरको कुरामा त यसको कुनै कम्प्लेन नै छैन म्याम ... पढाइमा पो कस्तो गर्यो खै ।
आमा : घरमा पनि पढ्नभन्दा धेरै केके पत्रिका हेरिबस्छ... खासै पढ्दै पढ्रदैन, कि मोबाइलमा व्यस्त कि त पत्रिकामा नै व्यस्त हुन्छ । कति भने पनि लाग्दैन ... ।
नवीना : यसपालि अन्तरविद्यालय नाटक प्रतियोगिता भएको थियो । त्यसमा उसले गरेको अभिनयकै कारण हामी प्रथम भयौँ नि ... । सर म्याडमहरूले उसको बारेमा चिन्ता गर्नै पर्दैन । ऊ असाध्यै मेहनती छ । ल हेर्नुहोस् उसले यसपालि मात्र पाएका प्रमाण पत्रहरू यति धेरै (नवीना सर उसको सर्टिफिकेटहरू दिन्छन् ।)
बाबा : खै म्याम, पढेर डाक्टर बन्छ कि भनेको यसले त के गर्छ गर्छ .... ?
नवीना : मेडिकल डाक्टर नभए नि ऊ आफ्नो जीवनको डाक्टर अवश्य बन्छ सर... दीपक बडो चलाख छ । पढाइ नै सबै कुरा पनि त मान्नु भएन नि । बच्चाको रुचिलाई पो ध्यान दिनु आवश्यक छ त सर ।
(सर्टिफिकेट लिएर त्यहाँबाट खुसीको भावमा नवीना म्यामसँग बिदा मागी नजिकै भएका नेपाली विषयको शिक्षक राजन निरौला भएको ठाउँमा पुग्छन् ।)
राजन : ए... दीपक बाबू... सर म्याडमहरूलाई नि नमस्कार
(दीपकका बाआमा दुवै जना सङ्गोलमा नमस्कार फर्काउँछन् । आराम विरामको कुरा हुन्छ ।)
आमा : बाबू कस्तो छ हजुरको विषयमा सर...?
राजन : म बाबूलाई नेपाली पढाउँछु म्याम ..... बाबू खासगरी लेखाइमाभन्दा बोलाइमा निक्कै अब्बल छ । मज्जाले हाउभाउ मिलाएर भाँती पुर्याएर बोल्छ म्याम ।
बाबा : त्यो त हो सर तर लेखाइ भएन भने बोलाइले मात्रे त के होला र सर ?
राजन : लेखाइमा पनि चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन सर त्यसो त । पाठ पढाउँदा खास गरी गीत, सङ्गीत, संवाद र नाटकमा बढो रुचि राख्छ र कुनै भूमिका दिए कलाकारलेभन्दा राम्रो अभिनय गरेर कक्षामा देखाउँछ । हामी त उसको कला देखेर अचम्मै हुन्छौँ सर...।
आमा : सर, यसलाई त लेखाइमा पनि उसको अभिनयमा जत्तिकै अब्बल बनाइदिनु पर्यो हजुरले ।
राजन : हुन्छ, सर म्यामहरूले चिन्ता नगर्नुस् । म आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्छु । बाबुले पनि केही मेहेनत गर्छन् अनि त कसो नहोला .... ।
(केही आश्वस्त भएर त्यहाँबाट उनीहरू अर्को विषय शिक्षक विज्ञान लेखिएको टेबलमा पुग्छन् । त्यहाँ निकै भीड र ठूलो हल्ला खल्ला सुनिन्छ । विज्ञानका विषय शिक्षक जीवन गुप्ता भएको ठाउँमा केही छिनको पर्खाइपछि पुग्छन् । शायना पनि आफ्नो अभिभावकका साथ त्यही हुन्छे ।)
शयना : नमस्कार सर ....
जीवन : ए ... शायना ... कोसित आयौ ?
शायना : मामु पापासँग सर ...
शायनाकी आमा : नमस्ते सर .... यसपाली शायनाले साइन्समा कस्तो गरी कुन्नि ... अरु त सबैमा राम्रै रहेछ ..... ।
जीवन : अरुमा राम्रो .... साइन्समा त झन् अब्बल भन्नै नपर्ने ....शायनाले साइन्समा ए प्लस पाएकी छन् ।
शायनाकी आमा : (मख्ख पर्दै) स्याबास .... छोरी हामीले चाहेको यस्तै हो .... एक्सेलेन्ट ! किप इट अप !
शायना : थ्यांक्यु मामु .... थ्यांक्यु सर... आइ विल ट्राइ फ्रम माइ साइड ......
शायनाका बाबा : ए .... मेरी छोरी त खोइ नि मलाई चैँ थ्याङ्क्यु .... ? बिर्र्सिकी ....?
शायना : सरी पापा .... आइ एम सो सरी ..... थ्याङ्क्यु सोच माइ स्वीट पापा...... (उनीहरू त्यहाँबाट बिदा हुन्छन्, त्यहीँ दीपकका बाबुआमा उनीहरूको संवाद सुनिरहेका हुन्छन् ।)
दीपक : गुड मर्निङ सर......
जीवन : ए ... दीपक मर्निङ ... अँ के छ तिम्रो खबर ?
दीपक : (टाउको निहुराएर ठिकै छ को भावमा मुन्टो मात्र हल्लाउँछ ।)
जीवन : (दीपकको बाबाआमालाई बस्न सङ्केत गर्दै) बाबुको घरमा कस्तो छ व्यवहार ? कत्तिको पढ्छ ?
आमा : खै के भन्ने सर पढेकै हुन्छ हुन त...।
जीवन : यसपालि पनि दीपकले साइन्समा त्यति राम्रो गर्न सकेन सर म्याम, भन्न पनि अप्ठ्यारो.... जति प्रयास मैले गरे पनि ऊ आफू साइन्समा कहिल्यै रुचि राख्दैन ... । दिमाग नै नभएको त हैन ।
(एकाएक सपरिवारको खुसीको भाव हराउँछ । सबभन्दा बढी बाबाको अनुहारमा तनाव देखिन्छ । जीवन पनि बडो अफसोचमा देखिन्छन् ।)
बाबा : अब यो डाक्टर नबन्ने भो । (लामो सास तान्दै) उत्तिकैमा शायनाको कस्तो राम्रो रिजल्ट छ । अनि कक्षामा चाहिँ के गर्छ त सर यो ?
जीवन : म उसलाई मात्र समय दिन सक्दिनँ । यसो एकछिन समय दियो राम्रै गर्छ । म अन्यत्र लाग्यो ऊ केके जातिको अभिनयमा लागिहाल्छ ।
आमा : यो त पाइलट पनि नबन्ने भो ... अब....।
(निराशा र तनावले भरिएको मन लिएर कक्षा शिक्षक विधान के.सी. भएको ठाउँमा पुग्छन् । उनीहरूलाई बोल्ने मन हुँदैन । परिस्थिति बुझेर विधान सरले नै वातावरणलाई सहज बनाउन प्रयास गर्दै औपचारिक नमस्कारको आदान प्रदान गर्छन् । दीपक र उनका बाबाआमालाई बस्न सङ्केत गरेर पानी पिउँदै ।)
विधान : दीपक, किन यति उदास तिमी ?
दीपक : (टाउको निहुराएरै सानो आवाजमा) मेरो यसपालि पनि साइन्स बिग्रियो सर ।
विधान : (सम्झाउने शैलीमा) हेर बाबू, घोडा चड्ने मानिस मात्र लड्छ, परीक्षा दिने विद्यार्थी मात्र फेल हुन्छ । खेलमा हार र जित भएजस्तै त हो बाबू, एकपटक हार्दैमा जीवनमा हरेश खाएर खेल खेल्नै छोड्न त हुँदैन नि ।
बाबा : तर, सर खै यस्ले त कहिले पो जित्ला र ?
विधान : हिम्मत हार्नु हुँदैन नि सर । पढाइ नै सब कुरा होइन । ऊ एउटा साइन्समा त हो कमजोर भएको तर .... उसको हातमा हेर्नुस् त कति धेरै प्रमाण पत्र छन् ... ।
आमा : (दिक्क मानेको भावमा) हैन सर ... यसको यो प्रमाण पत्रले पाइलट बन्छ र ?
विधान : जहाज उडाउने पाइलट नबने नि जीवनलाई सफलताको आकाशमा उडाउने पाइलट अवश्य बन्छ म्याडम । बोलीको प्रभाव राम्रो छ, अभिनयमा कुनै कलाकारले भेट्दैन, खेलकुदमा पनि उत्तिकै अब्बल छ दीपक... अलिकति मिहिनेतको खाँचो छ पढाइमा त्यो पनि साइन्समा मात्र ।
बाबा : यसलाई सम्झाबुझाई गरिदिनु पर्यो सरहरूले घरमा पनि अलिक पढोस् । (खिन्नताको भावमा)
विधान : (दीपकलाई धाप मार्दै) बाबुले धेरै कुरा सम्झि बुझिसकेको छ । अब उसलाई उसको इच्छाको काम गर्ने पनि केही मौका दिनुस् । उसको कामको पनि सम्मान गरिदिनुस् । बाबु आफै बुझ्ने भइसकेको छ । (दीपकतिर हेर्दै) होइन र ?
दीपक : (हो को भावमा मन्टो हल्लाउँदै आमाबाबा र विधान सरलाई हेर्छ । आमाको मुहारमा केही चमक देखिएको हुन्छ तर बाबा भने केही खिन्न नै देखिन्छन्)
(लामो समयपछि दीपकको काका काकी अमेरिकाबाट आएका हुन्छन् । साँझको समय घरमा एक किसिमको खुसीको वातावरण चलिरहेको हुन्छ । दीपक र बा भने त्यति खुलेर रमाइरहेका हुँदैनन् । दीपक साइन्समा फेल भएको कारण उनीहरूको मनमा आएको निराशा प्रस्टै अनुहारमा देखिन्छ । दीपकको काकालाई भेट्न दीपकका केही साथीहरू, अनि काकाकै साथीहरू, काकीका साथीहरू, बाबाका साथीहरू पनि आएका छन् । घरमा भीडभाड निकै बाक्लै देखिन्छ । दीपकको बालाई सम्झाउने बुझाउने प्रयास गदै छन् काका । )
काका : ए ... साँच्चै दाइ ... अघि त आराम बिरामको कुरा मात्र भयो । (कोठाको अर्को कुनामा जाँदै) दाइलाई आज म अलिक उदास देख्छु नि ... ।
बाबा : के भन्ने र ? (अलिक निराशाकै भावमा) यस्तो रमाइलोको बेला... यत्तिका वर्षपछि तँ आउँदा पनि केही खुसीको खबर दिन सकिएन... ।
काका : किन र दाइ के भयो ? कि.... दीपकको पढाइको कुरा ... ?
बाबा : अँ ... (थप कुरा गर्न खोज्दा खोज्दै)
काका : ए... ए.... मैले अघि नै थाहा पाइसकेँ नि .... अनि दीपकलाई सम्झाई पनिसकेको छु तर तपाईंको अनुहारमा खुसी नआएको कारण मात्र ऊ पनि निराश बनेको छ । (दीपक निराश मुद्रामा मोबाइल चलाइरहेको ठाउँतिर देखाउँदै) ऊ : हेर्नुस् त ।
बाबा : छोरो डाक्टर नबन्ने भो ... अब साइन्स नै फेल गर्छ । केके को सर्टिफिकेट ल्याउँछ ल्याउँछ । (मन्टो निहुराउँदै) चाहिने नचाहिने काममा चाहिँ अब्बल रे....
काकी : (काकाको छेवमै उभिएर) दीपकले साइन्स मात्रै त बिगारेछ नि ... किन यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्यो र ? उता अमेरिकामा त कुन विषयमा कमजोरभन्दा पनि कुन विषयमा ऊ सक्षम छ भन्ने विचार गरेर एजुकेशन दिने चलन छ नि दाजु ... ।
काका : चाहे ऊ अभिनयमा राम्रो होस् वा ऊ गीत गायन अनि वादविवाद .... उसको प्रतिभा हेरेर उसको पर्सानालिटी डेभलप गरिन्छ । मैले वहाँ पढाउने स्कुलको फिलोसोफी पनि त्यही नै हो ।
आमा : भन्न त दीपकको कक्षा शिक्षक विधान सरले पनि यस्तै कुरा गर्दैथे है ....
बाबा : नेपालमा यस्तो कुरा गरेर के गर्नु .... आखिरमा केही बन्ने पनि होइन बनेर पनि केही गर्न दिने होइन । (दिक्क मान्दै)
काका : हेर्नुस् दाइ.... छोरोलाई अब डाक्टर, इन्जिनियर अनि पाइलटै बनाउँछु भनेर हुँदैन । जे उनीहरूले बन्छु भन्ने चाहन्छन् । हामीले त्यसका लागि फेसिलियट गर्ने हो .... ।
काकी : दाइ बरु यसो गरौँ न त ... (बाबुलाई आफूतिर मायाले तान्दै) हामी उसलाई उतै लगेर पढाउँछौ अनि जे बने पनि हजुरका लागि गर्व गर्न लायक छोरो बनाएर पठाउँछौँ ।
काका : आखिर हाम्रो पनि त छोरो नै हो । उसले जे बन्न चाहन्छ म त्यसको लागि उताको स्कुल मेनेजरसँग अहिले नै स्काइपमा कुरा गरिहाल्छु ।
(ल्यापटपबाट स्काइपको अन गरेर अमेरिकास्थित आफूले पढाउने स्कुलका मेनेजरसँग दीपकको बारेमा विस्तृत कुरा गर्छन् । पृष्ठभूमिमा यता अरु परिवार भने पारिवारिक रमझममा रमाइरहेका हुन्छन् । )
काका : हेलो जेनी, नमस्कार ! हाउ आर यू ?
मेनेजर जेनी : नमस्कार–नमस्कार, आई एम फाइन, तपाई नि ?
काका : अँ, म पनि आरामै छु ।
काका : जेनी..., तिमीसँग एउटा सल्लाह लिऊँ भनेर ।
जेनी : आफकोर्स..... !
काका : मेरो भतिजो दीपक लिवरल आर्टमा निक्कै राम्रो रहेछ । उसको प्रतिभा बेजोड लाग्यो । साइन्समा भने अलि कमजोर रहेछ ।
जेनी : साइन्समा कमजोर हुँदैमा के भो त ? साइन्स मात्र जीवन हो र ?
काका : हुन त होइन .... त्यसैले त मैले उसलाई अमेरिका पठाउने विचार गरेँ नि । तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
जेनी : तिमीलाई थाहै छ नि । यहाँ त साइन्समै राम्रो हुनु पर्छ भन्ने छैन । साइन्स कमजोर भए पनि राम्ररी एड्मिसन पाउन सकिन्छ । तपाईँ भन्नुहुन्छ भने दीपकजस्तो विद्यार्थीलाई अमेरिकामा एड्मिसन पाउन कठिन छैन । यहाँ विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसार पढ्न पाउँछन् ।
काका : थ्याङ्क्यु जेनी ......
जेनी : वेल कम .... पठाउने पक्का हो भने त्यस्तो ट्यालेन्ट विद्यार्थीलाई स्कलरसिप पनि दिलाउँछु नि .....
काका : थ्याङ्क्यु सो मच जेनी .... बाइ
जेनी : बाइ ... ह्याब अ नाइस टाइम ....
काका : सुन्नुभयो दाजुभाउजू ! जीवनमा साइन्स ठूलो कुरा होइन । हामीले उनीहरूलाई इच्छा नभएको कुरामा जबरजस्ती गर्नु हुँदैन ।
काका : ल बधाइ छ .... तँलाई यहाँ साइन्समा कमजोर भए नि अमेरिकामा पढ्न पाउने भइस् । ल बधाइ छ दाइभाउजूलाई पनि .... उताको मेनेजरले भोलिबाट नै सबै डकुमेन्टेसन गर्नु यहाँबाट म १००∞ स्कलरसिप मिलाउने प्रयास गर्छु भनेका छन् ।
बाबा : हैन, यस्तो अल्छे, पत्रिका मात्र हेर्ने, केकेको चित्र कोर्ने, दुनियाँको क्यारिकेचर गर्ने, साइन्समा गुल्टिने विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति ? (अचम्मको भावमा) त्यो पनि अमेरिकामा ...?
काका : ती सबै यसको ट्यालेन्ट हो । त्यहाँ विद्यार्थीमा जुन ट्यालेन्ट छ । त्यसैलाई तिखारेर अब्बल बनाउने काम हुन्छ । यसलाई यही राखेको भए सबैको नजरमा यो चटके हुन्थ्यो, बेलैमा अवसर पाउने भयो अब डा. पाइलट, इन्जिनियर नबने नि एक सफल व्यक्ति अवश्य बन्ने छ दाइ... ।
शायना : अब त तैँले सोचेजस्तै हुने भो .... कङ्ग्य्राचुलेसन .... दीपक ..... (बधाइको अङ्गालोमा बाँधिन्छन् ।)
दीपक : (बाबाको अनुहारमा हेर्दै, त्यति खुसी नभई) खै शायना .... धेरै कुरा अँझै बाँकी छ ।
शायना : अब त खुसी हु दीपक ..... (लामो मायालु आवाजमा)
आमा : (दीपकलाई अङ्गालोमा बाँधेर) तेरो काकाले यत्ति धेरै बुझाउनु भयो अब त मैले बुझिसकेँ नि छोरा ... अब त हाँस ।
काका : (केही खुसी देखिएका दीपकका बाबालाई अङ्गालो हाल्दै) दाइ..... अब त हाँस्नुस् ... छोरोको भविष्य पहिल्यै सुन्दर थियो अब सुनमा सुगन्ध थपिएको छ ।
बाबा : (हाँसो मिश्रित आवाजमा छोरालाई अङ्गालो हाल्दै) बुझेँ बा... बुझेँ .... हाहाहा..... छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा मात्र होइन राम्रो अवसर पनि चाहिने रैछ ..... ।
(सबै जना हो हो को भावमा गललल्ल हाँस्छन्, परिवारै उल्लासमय वातावरणमा रमाउँछन् । पृष्ठमूमिमा सङ्गीतको मीठो धुुन गुञ्जिरहेको हुन्छ ।)
पर्दा बन्द ।